श्रीजेश घिमिरे | गृहपृष्ठ
Home अभियान परिशिष्ट (सप्लिमेन्ट) श्रीजेश घिमिरे
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, एनएमबी क्यापिटल लि
‘सामूहिक लगानी कोषले लगानीकर्ताको सानो रकम पनि व्यवस्थापन गर्छ’
सामूहिक लगानी कोष स्थापनाको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ ?
सामूहिक लगानी कोष स्थापनाका लागि एनएमबी बैङ्कले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट कोष प्रवद्र्धकको अनुमति पाइसकेको छ । सामूहिक लगानी कोषका रूपमा काम गर्न कोष प्रवद्र्धकसहित कोष सुपरिवेक्षक, योजना व्यवस्थापक र डिपोजिटरीसमेत हुनुपर्छ । आगामी साता हामीले योजना व्यवस्थापकका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिने योजना बनाएका छौं । एनएमबी क्यापिटलले योजना व्यवस्थापकको काम गर्नेछ । हाल हाम्रो चुक्ता पूँजी रू. १० करोड छ । हामीले पहिलो चरणमा रू. ५० करोडदेखि ६० करोडको योजना (स्किम) ल्याउने सोच बनाएका छौं । त्यसपछि ३/४ महीनाको अन्तरालमा लगानीकर्ताको चाहना/मागअनुसार अन्य विविध स्किम पनि ल्याउन सकिन्छ ।
योजना व्यवस्थापकमा ४९ प्रतिशतसम्म गैरआवासीय नेपालीको लगानी भएको संस्थाले पनि शेयर स्वामित्व लिन सक्ने व्यवस्था छ । उनीहरूलाई साझेदार बनाउने प्रयास गर्नुभएन ?
हामीले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा यो प्रस्ताव राखेका छैनौं । यद्यपि, उनीहरूसँग विभिन्न समयमा भेट हुँदा यस्तो सम्भावनाबारे छलफल भने गर्दै आएका छौं । यसबाहेक गैरआवासीय लगानीकर्ताले सामूहिक लगानी कोषका एकाइहरू खरीद गर्न सक्छन् । त्यसैले, लगानीका लागि यो क्षेत्र उनीहरूलाई निकै आकर्षक हुन सक्छ । सामूहिक लगानी कोषमा लगानी गर्दा जोखिम कम रहने, तर राम्रो प्रतिफलको सम्भावना रहेकाले पनि गैरआवासीय नेपालीको लगानी भित्रने सम्भावना अत्यधिक देखिएको हो । अन्तरराष्ट्रिय शेयर बजार वा अन्य कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्दा त्यहाँको प्रतिफल दर निकै कम हुन्छ ।
जब कि नेपालमा शेयरमा लगानी गर्दा पनि ४/५ प्रतिशत र बैङ्कहरूको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्दा ८ देखि १० प्रतिशतसम्म प्रतिफल पाउने अवस्था छ । त्यस्तै प्रतिफल सामूहिक लगानी कोषका एकाइहरूमा गरिएको लगानीबाट पनि प्राप्त हुन सक्छ । बोर्डले सामूहिक लगानी कोषले विविध क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ । यसले गैरआवासीय लगानीकर्तालाई समेत विविध क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसर जुटाइदिएको छ ।
अहिले एकैपटक दुई/तीनओटा सामूहिक लगानी कोष सञ्चालनमा आउँदै छन् । यो क्षेत्रको भविष्यबारे कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?
अहिले सामूहिक लगानी कोष स्थापना गर्न प्रवद्र्धक कम्पनीको चुक्ता पूँजी रू. १ अर्ब हुनुपर्ने व्यवस्था छ । नियामक निकायले चाहेरभन्दा पनि बजारको आवश्यकताअनुसार कोष प्रवद्र्धकमा धेरैजसो बैङ्क (वित्तीय) संस्था नै देखिएका छन् । हाम्रो बजारमा ५/६ ओटा म्युचुअल फण्ड स्थापना हुँदा त्यस्तो समस्या आउँदैन । यसले कम्पनीलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउनेछ । यसले कम्पनीहरूलाई थप नयाँ र आकर्षक योजना ल्याउन प्रेरित गर्नेछ । अहिले सबैजसो कोषको उद्देश्य बन्दमुखी योजना ल्याउने रहेको छ । बजारको आकार ठूलो नभएको र बजारमा सधैं तरलता प्रशस्त नहुने भएकाले अहिले खुलामुखी योजना ल्याउन सहज देखिँदैन ।
तर, हामीले केही समयको अन्तरालपछि भने खुलामुखी योजना पनि ल्याउने सोच बनाएका छौं । शुरूमा जटिल किसिमको र ठूलो रकमको यस्तो खुलामुखी योजना नल्याई साना खालका ल्याउनेछौं । यसका लागि ‘ओभर दि काउण्टर’ अर्थात् एक्सचेञ्जबाहिर पनि यी एकाइ खरीदविक्री गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । ओभर दि काउण्टरको सेवा उपत्यकाबाहिरबाट पनि दिन सक्ने अवस्था रहन्छ । त्यसैगरी, काठमाडौंबाहिरबाट पनि शेयर खरीदविक्री गर्न सकिने अवस्था रहेमा तथा सीडीएस एण्ड क्लियरिङ कम्पनी सञ्चालनमा आएमा सूचीकृत भएका कोषका एकाइहरू उपत्यकाबाहिरबाट किनबेच हुने अवस्था रहन्छ ।
अर्कातर्फ उपत्यकाबाहिर नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका शाखा खोल्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको देखिन्छ । त्यसो हुन सकेमा शेयर बजार फराकिलो बन्दै जाने सम्भावना छ । हामीले शेयर विक्री प्रबन्धकका रूपमा काम गर्दा प्राथमिक शेयर निष्कासनमा एकपटक परीक्षणका रूपमा अनलाइनमार्फत आवेदन गर्ने व्यवस्था गर्न लागेका थियौं । तर, विभिन्न कारणले आंशिक रूपमा मात्र गर्न सक्यौं । यस्तो प्रणालीको विकास गर्न सकियो र त्यसलाई नियामकहरूले पनि मान्यता दिए भने हाम्रा एकाइहरू विक्री गर्न पनि समस्या हुँदैन । यसमा सबै खालका लगानीकर्ताले लगानी गर्न सक्छन् । लगानीकर्ताको हजार रुपैयाँको पनि व्यवस्थापन सामूहिक कोषले गरिदिन्छन् । त्यसैले पनि यो क्षेत्रमा विकास सम्भावना अत्यधिक छ ।
सर्वसाधारण लगानीकर्तामा सामूहिक लगानी कोषबारे कत्तिको जानकारी रहेको पाउनुभएको छ ?
यसबारेमा केही समयअघि हामीले बजार अनुसन्धान गरेका थियौं । सकेसम्म निष्पक्ष हुन अनुसन्धान कार्यमा सहभागीहरूलाई आग्रह गरिएको थियो । सो अनुसन्धान विभिन्न स्थानमा ४ सय व्यक्तिसँग गरिएको हो । यसमा २० प्रतिशत मात्र नियामक निकाय, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि थिए । उनीहरूलाई अलग्गै किसिमका प्रश्नहरू गरिएका थिए । तर, ८० प्रतिशत मानिस सबै वर्गका थिए । अनुसन्धानमा स्वतन्त्र नमूना छनोट विधि अपनाइएको थियो ।
उनीहरूमा सामूहिक लगानी कोष भनेको के हो भन्ने राम्रो जानकारी रहेको पाइयो भने धेरै यसमा लगानी गर्न उत्सुक रहको पनि अध्ययनले देखाएको छ । विभिन्न गोष्ठी र छलफल कार्यक्रममा उपत्यकाबाहिर जाँदा पनि मानिसमा यस्तै उत्साह देखिन्छ । सर्वसाधारण लगानीकर्ताले बुझेका छन् कि यसमा बैङ्कमा जस्तो निश्चित प्रतिशत ब्याजका लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्दैन । अब हाम्रो काम भनेको लगानीकर्तालाई लगानी प्रक्रियाबारे जानकारी दिनु हुनेछ ।